फाल्गुन ९, २०७७ १०:३५:३६ • ७६८ पटक पढिएको
शनिबार दिउँसो कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ को चौराहको सुकुम्बासी बस्ती भत्किसेकेको थियो । सुकुम्बासी बस्तीमा सानो नास्ता पसल खोलेर बसेकी तारा मल्ल असरल्ल फिजारिएका सामान हेर्दै रुदैं थिईन् । उनको साहाराका रुपमा १ छोरा छन् । उनका छोरा बोल्न सक्दैनन् । ज्यामी काम गरेर परिवार पाल्न मुस्किल पर्छ । ताराले आफ्नो हातगोडा चल्दासम्म आफै गरेर खान्छु भन्दै सहकारीबाट ५ लाख ऋण लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा १ वर्ष पहिले नास्ता पसल राखिन् । तर स्थानीय सरकारले बस्ती नै भत्कायो अब कहाँ जाने ? के गर्ने ? कसरी सहकारीको ऋण तिर्ने ? उनलाई निकै अन्यौलता छाएको छ । उनले भनिन्,–‘कमाउला तिरौला भन्छु तर पैसा नै जम्मा हुँदैन भरखरै राखेको ग्राहक पनि खासै आउदैनन् । मेरो साथमा १ रुपैयाँ पनि छैन ।’
शनिबार दिउँसो सुकुम्बासी बस्ती भर्खरै खाना खाएर भाडाकुडाँ धुदैँ थियो । सुरक्षाकर्मीको लावालस्करसहित सरकारी डोजर बस्तीमा घुस्यो उक्त सुकुम्बासी बस्तीलाई भग्नावशेष बनाएर फर्कियो । ‘म त डोजर आउने बित्तिकै घुम्ती हटाउँछु भनेर हतार हतारमा हटाउँदै थिए । झ्याप्पै आईहाल्यो । मेरो घुम्ती त एकैछिन्मा खेस्राखेस्रा बन्यो । मेरो पनि खुट्टामा चोट लागेको छ । हिड्नडुल्न सकेको छैन ।’ पूर्णदेवी घर्तिमगरले दुखी हुँदै भनिन् । डोजरले टहरा भत्काउन थालिसकेछ,’ सुकुम्बासी बस्तीकी एकजना १ महिने सुत्केरी महिलाले भनिन्, ‘बाहिर निस्कँदा अत्यास लाग्यो । भित्र गएर रोइरहेको बच्चा च्यापेँ । अब यो १ महिनाको बच्चालाई लिएर कहाँ जाउँ ? सामान पनि निकाल्न सकिएन ।
उक्त बस्तीवालालाई विगत लामो समयदेखि बस्ती हटाउन कोहलपुर नगरपालिकाले बारम्बार पत्र पठाउने गरेको थियो । बस्ती भत्काउनु भन्दा अगाडी उनीहरुलाई बस्ती खाली गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । तर उनीहरुले भने बस्ती सारेका थिएनन् । बस्तीकी एक किशोरी चित्रा भण्डारीले भनिन्,– हामी सार्नेवाला नै थियौ । तर शनिबार भएकोले डोजर आउला भन्ने लागेकै थिएन ।’ बस्तीका सुकुम्वासीहरुको सानो झुपडीलाई डोजरले सोत्तर बनाएपछि उनीहरुसँग केही बाँकी रहेन । ‘हामी तपाईहरुकै अगाडी सामान निकाल्छौ । अहिले नभत्काउनुहोस् । डोजर रोक्नको लागि उनीहरुले हातपाउ जोडे । तर डोजर निरन्तर चल्यो । डोजर बस्ती होईन आफ्नो छातीमा चलेको उनीहरु महशुस गरे ।
सुकुम्बासी बस्ती डोजरले सोत्तर बनाएपछि त्यहाँ बस्दै आएका धेरै परिवारको बेहाल भएको छ । लामो दुरीको अत्याधुनिक बसपार्क बनाउनको लागि उक्त बस्ती खाली गर्नुपर्ने कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । लामो दुरीको अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने तयारी पनि भैसकेको छ । बसपार्क निर्माणका लागि कोहलपुर नगरपालिका र नगर विकास समिति बीच गत असोज महिनामै २५ वर्षका लागि लिज सम्झौता गरिएको भैसकेको थियो । करिब ४५ करोडको लागतमा बसपार्क निर्माण हुन लागेको हो । कोहलपुर बसपार्कबाट राष्ट्रियदेखि अन्र्तराष्ट्रि«य बसहरु समेत सञ्चालन हुनेछन् ।